बालकथा : चलाख काग र उल्लू « Janata Samachar
एउटा ठूलो जंगलमा धेरै उल्लूहरु बस्थे । त्यो जंगललाई ‘उल्लू वन’ भन्ने गरिन्थ्यो । त्यहाँका ती उल्लूहरुलाई दिउँसो आँखा देख्न सक्ने पंक्षी हुन्छन् भन्ने थाहा थिएन ।
एकदिन ‘उल्लू वन’ मा अचानक कालो, लामो चुच्चो भएको काग पुग्यो । त्यसले चश्मा लगाएको थियो । उसको गर्दनमा एउटा थैली पनि टल्किरहेको थियो । रात पर्नसाथै उल्लुहरु आफ्नो समूह बनाएर त्यो अनौठो पंक्षीलाई हेर्न गए । त्यहाँ पुगेसी एक उल्लूले कागलाई सोध्यो, ‘तपाइँ को हो ? र कहाँबाट आउनुभएको ?’
कागले जवाफ दियो, ‘म भगवानको दूत हुँ । म स्वर्गबाट तिमीहरुको वनमा आएको हुँ ।’
यो कुरा सुनेर एउटा उल्लूले भन्यो, ‘उल्लू वनमा तपाइँलाई स्वागत छ । कृपया तपाइँ यहाँ आउनुको कारण बताउनु हुन्छ की ?’
कागले जवाफ दियो, ‘वास्तवमा तिमीहरुलाई भगवानले बनाउँदा एउटा गल्ति गर्नुभएको थियो । त्यसैले तिमीहरु कसैले पनि दिउँसो देख्न सक्दैनौ । भगवानले आफ्नो गल्ति सम्झेर तिमीहरुको लागि चश्मा पठाउनुभएको छ । यो लगाएर तिमीहरु दिउँसो पनि देख्न सक्छौ ।’
कागले आफूलाई आउने जाने खर्च पूरा गर्न चश्माको दाम १० रुपैयाँ लिने बतायो ।
यो लगाएर दिउँसो पनि देख्न चाहन्छौ भने १० रुपैयाँ खर्च गरेर लिन सक्छौ । वनमा भएका सबै उल्लू चकित परे । उनीहरु एकापसमा कानेखुसी गर्न थाले । एउटा उल्लूले भन्यो,
‘हामीलाई कसरी विश्वास हुन्छ कि तपाइँको चश्माले दिउँसो देख्न सकिन्छ भनेर ?’
कागले भन्यो, ‘सूर्य उदाउने बेला भएको छ । तपाइँहरु अहिले नै परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । तर मलाई अर्को बिहानसम्म यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ ।
केही समयपछि जब घाम लाग्यो त्यसपछि काग एउटा ठूलो रुखको मुनि गयो र चश्मा लगाएर कुन उल्लू कसरी बसेको छ, कहाँ बसेको छ सबै एकएक भन्यो । उसले दिउँसो पनि आफूहरुलाई देखेकोमा दंग परे । तर एउटा बुढो काग भने चुपचाप बसिरहेको थियो । उसले आफ्ना हजुरबुबाहरुले भनेको सुनेको थियो कि एउटा कालो रंगको, लामो चुच्चो भएको काग हुन्छ जुन धेरै बाठो हुन्छ । उसले दिउँसो पनि आँदा देख्छ । त्यसले बच्चाहरुको रोटि पनि चोरेर खान्छ । त्यो कुरा सम्झेर बुढो कागले आफ्नो शंका सबै उल्लूलाई सुनायो ।
त्यसपछि त्यो बुढो उल्लू कागसँग बोल्यो, ‘तपाइँ मलाई चश्मा लगाइदिनुस । म आफ्नो घरबाट पैसा ल्याएर दिन्छु ।’
बुढो उल्लूको कुरा सुनेर कागले भन्यो, ‘यो चश्मालाई राति मात्र किन्न सकिन्छ र किन्नु भन्दा पहिले लगाउन दिन पनि मिल्दैन । यो भगवानको आदेश हो ।’ यो कुरा सुनेर सबै उल्लूहरुले शंका गर्न थाले । केही समयपछि बुढो उल्लुले कागलाई धेरै टाढाबाट आफूहरुको सेवाको लागि आएकाले स्वागत गर्ने र त्यसका लागि आफ्नो बस्ने ठाउँमा जानुपर्ने बतायो । उनीहरुको बस्ने ठाउँ अँध्यारो थियो । तर खानेबस्नेको राम्रो व्यवस्था थियो । उनीहरुले कागलाई निन्द्राको औषधी पनि खानामा राखेर खुवाए । खाना खाइसकेपछि काग निदायो ।
काग निदाउने बित्तिकै एउटा उल्लूले चश्मा लगाएर बाहिर गयो । उनीहरुले सबै चश्मा परीक्षण गरे । उनीहरुको शंका सहि निस्कियो । उनीहरुले चश्मा लगाएर पनि केही देखेनन् ।
साँझ परिसकेको थियो । काग ओछ्यानबाट उठेर बोल्यो, ‘जसलाई चाहिएको छ चाँडै चश्मा किन्नुस । म अब स्वर्ग जानुपर्छ । उल्लूहरुले जवाफ दिए, ‘कागजी हामीले तपाइँ र तपाइँको चश्माको परीक्षा लियौँ । अब तपाइँ स्वर्ग जानको लागि तयार हुनुस् ।’
यति भन्नासाथ उल्लूहरुले चुच्चोले उसलाई ठुग्न थाले । काग उडेर भाग्न लागेको थियो तर बाहिर पनि उल्लूले घेरेका थिए । बच्ने उपाय नदेखेपछि उल्लू रँदै कराँदै विलाप गर्न थाल्यो । उनीहरुसँग खुब माफि माग्यो । फेरि यस्तो गल्ति नगर्ने भनेर प्रतिबद्धता समेत गर्यो ।
उसलाई देखेर एक उल्लूले भन्यो, ‘भगवानको दूतलाई माफि दिने हाम्रो औकात कहाँ छ र ?
उसको कुरा सुनेर सबै उल्लू हाँसे ।
संकलक : अम्बिका खड्का